ठेला चालकद्वारा सुरक्षा गार्डको हत्या
मोरंङ । विराटनगर महानगरपालिका २ मा संचालित बिक्की हार्डवेयरमा कार्यरत सुरक्षागार्डको हत्यामा सलग्न व्यक्ति एकसातापछि पक्राउ परेका छन् । ३ भदौमा कार्यरत अवस्थामै रहेका बेला विराटनगर ४ का ५१ वर्षीय टंकप्रसाद भट्टराईको विभत्स हत्या भएको थियो । उनको हत्यामा सम्लग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले विराटनगर ४ जामुनगाछिका २६ वर्षीय सञ्ज्य सहनीलाई पक्राउ गरेको हो ।
स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत ठगुन्नाको हत्या
बैतडी, भदौ ६ । दार्चुलाको मार्मामा स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीको हत्या भएको छ । मार्मा गाउँपालिका–१ घोल्जर घर भई गुल्जर स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत ४६ वर्षीय अंगवीरसिंह ठगुन्नाको मङ्गलबार हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी निरीक्षक हिक्मत बोहराले जानकारी दिए ।
पूर्वराजदूत झाको टाउकोमा सातपटक चक्कु प्रहार
काठमाडौं । फ्रान्सका लागि नेपालका पूर्वराजदूत केशव झाको हत्या भएको छ । ८० वर्षीय झा सोमबार बिहान बबरमहलस्थित निवासमा मृत भेटिएका थिए । शवको प्रकृति र घरमा भेटिएका प्रमाणका आधारमा झाको हत्या भएको प्रहरीले दाबी गरेको छ ।
प्रहरी हत्या अभियोग लागेका राज्यमन्त्री शर्मा साधारण तारेखमा रिहा
बर्दिबास । सशस्त्र प्रहरीका सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन बिक हत्या अभियोग लागेका प्रदेश नम्बर २ का सामाजिक कल्याण राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् । सोमबार मध्याह्न महोत्तरी जिल्ला अदालतमा आफैँ हाजीर भएका राज्यमन्त्री शर्माको बयान र मुद्दाको बहसपछि उनलाई जिल्ला न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेलको आदेशले साधारण तारेखमा रिहा गरिएको हो ।
छ्यापछ्याप्ती प्रहरी परिचालन गर्दा अपहरणकारी तर्सिएर निशानको हत्या !
काठमाडौं । निशान खड्का अपहरणमा परेको सूचना पाउनेबित्तिकै प्रहरीका दुई निकाय महानगरीय प्रहरी परिसर र अपराध महाशाखाले काँडाघारी पुगेर अनुसन्धान थाले। निशानकी आमा चमेलीको चित्कार एउटै थियो, ‘मेरो बाबु तिमी कहाँ छौ ?’ प्रहरीमा सवा नौ बजे मात्रै निशान अपहरणमा परेको र फिरौती मागेको सूचना पुगेको थियो।
अपहरकारीले कसरी निशानको हत्या गरे ?
काठमाडौं । अपहरणपछि हत्या गरिएका काठमाडौं, काँडाघारीका निशान खड्काको घाँटीभित्र एकमिटर लामो रुमाल (कपडा) जबरजस्ती घुसाएर निर्मम ढङ्गले हत्या भएको ‘पोस्टमार्टम’ रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
शिशुलाई जन्माएर हत्या गर्ने आमा पक्राउ
लमजुङ । नवजात शिशु हत्या गर्ने आमालाई सोमबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । दुधपोखरी गाउँपालिका–२ विचौरकी विष्णुमाया परियारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । गत शुक्रबार नवजात शिशुलाई जन्माएर हत्या गरेको सूचनाका आधारमा परियारलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक यादव ढकालले जानकारी दिए ।
अपहरणकारी मात्र होइन, प्रमाण पनि मारियो
काठमाडौं । काँडाघारीस्थित हाइल्यान्ड स्कुलमा कक्षा ६ मा पढ्ने निशान खड्का सधैँझै आइतबार पनि चार बजेपछि विद्यालयबाट फर्किए । आमा चमेलीले गार्डेन चोकमा सञ्चालन गरेको चिया पसलमा खाजा खाए । ज्यामिरे–९ सिन्धुपाल्चोक घर भएकी चमेलीले सात वर्षदेखि यही क्षेत्रमा पसल चलाउँदै आएकी छिन् भने उनका श्रीमान् मलेसियामा मजदुरी गर्छन् ।
निशानको पीडादायी वियोगले गाउँमा रुवाबासी, ७२ वर्षीय हजुरबुवा बेहोस
चौतारा । काठमाडौको काँडाघारीबाट आइतबार अपहरणमा गरी हत्या गरिएका ११ वर्षीय निशान खड्काको गाउँमा रुवाबासी चलेको छ । सामाजिक सञ्जालबाट निशान हत्याको जानकारी पाएपछि मेलम्ची नगरपालिका–९, दोबाटे रातमाटास्थित परिवार र आफन्तजन शोकमा डुबेका हुन् ।
अंश जोगाउन दाजु, भाउजु तथा ४ वर्षीय छोरीको हत्या
राजविराज । अंश जोगाउनका लागि राजविराज नगरपालिका–१५ मुसहर्नियामा भाइकै योजनामा दाजुको परिवारका तीन सदस्यको हत्या भएको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले खुलाएको छ ।